एक अभिभावकको शिक्षामन्त्रीलाई खुल्ला पत्र : यथास्थितिमा छोराछोरी विद्यालय पठाउन सक्दैनौं - Best Khabar
माननीय शिक्षा बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेल ज्यू,
सिंहदरबार काठमाण्डौं ।
बिषय : असार १ गतेदेखि खुल्ने विद्यालयमा छोराछोरी पठाउन नसक्ने सम्बन्धमा ।!
मन्त्रीज्यूको गाथमा पक्कै सन्चो आरामै नै होला ! रुखाखोकी जस्तो सामान्य समस्या हुने बितिकै त निजी अस्पतालको स्वीट् हुनुहुन्न्छ भन्ने समाचार पत्रपत्रीकाले जोडतोड छाप्थे र हामी गाँउले जनताले पनि थाहा पाउथ्यौं । देश कोरानाले आक्रान्त बनेको छ । हामी जनता बिगत ७० दिनदेखि घरमा थुनिएका छौं ।
अलिअलि जोहो गरेको दाल चामल पनि लगभग सकिन लाग्यो अब त के खाने भन्ने पिरमा रातभर निन्द्रा पनि लाग्न छाड्यो । लकडाउन खुल्ला र बाहिर निस्केर सरसापटी एबम सानोतिनो काम गरेर दाल चामलको ब्यबस्था गरौँला भनी आशा गरिरहेको बखत समाचार आयो ‘लकडाउन फेरि १२ दिन थपियो ।’ हामी बोल्न नसक्ने निमुखा जनता के नै पो गर्न सक्छौ र ? फेरि जो आदेश भनेर घरमा थच्चिने उपायको खोजीमा थियौँ तर हिजो एक्कासी हजुरको कडा आदेश आएछ, असार १ गतेदेखि स्कुलहरु खोल्नु भनेर ।
लकडाउन खुकुलो बनाउन सहमत नहुने तपाईँहरु स्कुल खोल्न तयार भयको सुन्दा रुखको हाँगाबाट भुईमा खसे झै भएँ । जेष्ठको अन्तिमदिनसम्म लकडाउन गर्ने अनि त्यसको भोलिपल्टै हाम्रा छोराछोरी स्कुल पठाईदिनुपर्ने ? विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार सानासाना बालबालिको सामाजिक दुरी कायम गर्छन् त ? त्यसै अनुरुप बिद्यालयहरुले तयारी गरेका छन त ? भुकम्पपछि भत्केका कैयन गाँउका बिद्यालयहरु अझै बनेका छैनन । बिद्यार्थीहरु जस्ताको टहरामा पढ्न बाध्य छन् ।
यस्तो विश्वव्यापी महामारीका बेला के ति बालवालिका सुरक्षित होलान् ? सयौँको संख्यामा सरकारी बिद्यालयलाई कोरोनाको आशंका गरिएकाहरुलाई राख्नको लागि क्वारेन्टाइन स्थल बनाइएको छ । त्यहाँका बिद्यार्थीलाई कहाँ लगेर पढाउनु हुन्छ ? कि निजी स्कुल मात्र खोल्ने र उनीहरु लाई लुट्न दिनु पर्ने बाध्यता आईलाग्यो तपाईलाई ?
सुने अनुसार तपाईँ अविवाहित हुनुहुन्छ । देश र जनताको लागि दौडँदा दौडदै बिहे गर्न भ्याउनु भयन होला । यदि तपाईका नातिनातिना थिए भने यो अवस्थामा स्कुल पठाउनु हुन्थ्यो ? तपाईलाई अलिकती भएपनि शरम लाग्नु पर्ने परिक्षाको अघिल्लो दिन कोरोनाको खतरा देखाएर एसईइ रोक्नु भएको थियो । त्यतिबेला अहिलेजस्तो भयाबह अवस्था र स्थिती थियन, तर अहिले सबैजसो मानिसको दैलोमा कोरोनाले ढक्ढक्याएको अवस्थामा हाम्रा मुटुका टुक्राहरु लाई स्कुल पठाउ भनेर कसरी भन्न सक्नुभएको ? के हेरेर बस्नु भयको छ ? अहिले ती एसईइ परिक्षा दिनबाट बन्चितहरु तपाईको अनुहार हेरिरहेका छन् के उत्तर दिनुहुन्छ तिनिहरुलाई ? आफ्नो आङ्गको भैंसी देख्न छाड्नु भयको हो र ? अरुको लिखा देखाउँदै हुनुहुन्छ ?
सुने अनुसार तपाईँ अविवाहित हुनुहुन्छ । देश र जनताको लागि दौडँदा दौडँदै बिहे गर्न भ्याउनु भयन होला । यदि तपाईका नातिनातिना थिए भने यो अवस्थामा स्कुल पठाउनु हुन्थ्यो ? तपाईलाई अलिकति भएपनि शरम लाग्नु पर्ने परिक्षाको अघिल्लो दिन कोरोनाको खतरा देखाएर एसईइ रोक्नु भएको थियो ।
त्यतिबेला अहिलेजस्तो भयाबह अवस्था र स्थिती थियन, तर अहिले सबैजसो मानिसको दैलोमा कोरोनाले ढक्ढक्याएको अवस्थामा हाम्रा मुटुका टुक्राहरु लाई स्कुल पठाउ भनेर कसरी भन्न सक्नुभएको ? के हेरेर बस्नु भयको छ ? अहिले ती एसईइ परिक्षा दिनबाट बन्चितहरु तपाईको अनुहार हेरिरहेका छन् के उत्तर दिनुहुन्छ तिनिहरुलाई ? आफ्नो आङ्गको भैंसी देख्न छाड्नु भयको हो र ? अरुको लिखा देखाउँदै हुनुहुन्छ ?
हाम्रा बालवालिकाको जीवनसँग खेलबाड तथा खेलाँची गर्न नतम्सनुहोला । जीव्न पहिलो सर्त हो । एक बर्ष ढिलो हुँदा धेरै नोक्सानी हुन्न जति कोरोनाको कारण केही नसोचेको दुर्घटना भयो भने हुन्छ । तसर्थ यस्तो बिषम अवस्थामा स्कुल खोल्न भनी गरेको निर्णयका बारे पुनर्बिचार गर्नुहोस । पीडामा रहेका जनतालाई थप उत्तेजित नपार्नुहोस् । तपाईलाई खुलाई दिनुपर्ने ठुलै दबाब छ भने पनि हामी हाम्रा छोराछोरी लाई कोरोनाको अवस्थाको एकिन नभैकन स्कुल पठाउन नसक्ने र स्कुलहरुले पढ्न नपठाएको अबधिको बिल पेस गरेमा च्यातिदिने तथा कुनै हालतमा एक रुपैयाँ पनि नतिर्ने ब्यहोरा यसै बिद्यूतीय पत्र मार्फत निबेदन गर्दछु । आशा छ मेरो पत्रले तपाईको चित्त धेरै दुः खाउने छैन ।
एक पीडित अभिभाबक
नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर १४, धादिङ्,
हाल : रानीबन काठमाडौं ।
फ्रान्समा कोरोना ताण्डब : एकैदिन १४ सय भन्दा बढीको मृत्यु
एयरपोर्टको सिसिटिभी फुटेज सार्वजनिक भएपछि गायिका आस्था राउत रुँदै लाईभमा (भिडियोसहित)
युरोपेली मुलुक स्पेनका गुरुङ्ग समुदायले मनाए पनि मनाए तमुल्होसार
०९ मार्च, २०२० दोहो । कतारले कोरोना भाईरसको प्रकोप...
०२ जनवरी, २०२० काठमाडौं । अहिलेको प्रधिस्पर्धात्मक बैकिङ्ग बजारमा...
भारतले मिचेको भूमि फिर्ता ल्याउन कठिन छ, तर ल्याएरै छाड्छौं : प्रधानमन्त्री
२०७७ जेठ ६ गते मंगलबार
१९ मे, २०२०काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले...